Nhau - Ndeapi masimbi-akavharirwa maglobhu evharuvhu akapatsanurwa kuita zvinoyerera chiteshi fomu?
Simbi-yakavharika globe vharuvhu
1. Yakarurama kuburikidza nepasi rose vharuvhu
Iyo "yakatwasuka nepakati" muvhavha yakatwasuka-yepasi rose ndeyekuti magumo ayo ekubatanidza ari pane axis, asi chiteshi chayo chemvura hachisi "chakatwasuka", asi chinotyisa. Kuyerera kunofanirwa kutendeuka 90 ° kuti ipfuure nepaseat wozodzoka 90 ° kuti udzokere munzira yayo yekutanga. Mumavharuvhu akakanda, chiteshi chimiro nenzvimbo zvinosiyana zvichienderana nehukuru hwevhavha uye chiyero chekumanikidza.
Z chiteshi chimiro cheyakagurwa-vharavha vharafu, kana yemahara yekuchengetedza kufa yekugadzira muviri muviri inowanzo pinza uye kutumira kunze chiteshi uye yepakati mutsetse wepombi mune imwe Angle, kureva chimiro Z kuyerera chiteshi, uye inowanzo shandurwa kuita kudzikisira, kunyangwe yakatetepa kuzarura uye kuyerera kunoyerera kuchawedzera zvakanyanya kupera kwemvura, uyezve zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kutendeuka kweAngle yakaoma mukushanda kwemamiriro emvura eacavitation.
2. Angle globe vharafu
Tsvaga kumashure kune nhoroondo yekuvandudza yevhavha yepasi, iyo yekutanga kuvandudza iAngle globe vharafu, uye zvobva zvazoita zvishoma nezvishoma kuita yakatwasuka-kuburikidza neglobe vharuvhu. Kunyangwe yakatwasuka-kuburikidza nepasi rese mavhavha ari anowanzo shandiswa nhasi, maAngle globe mavhavha achine zvimwe zvakasarudzika zvakanaka
Angle globe mavharuvhu anotendera kuyerera kushandura makumi mapfumbamwe mafambiro uye gara uchipinda kubva pasi pechigaro. Mumhanyi ari akavhurika uye asinganetsi kutwasuka pane iyo yakatwasuka-kuburikidza, saka pane kushomeka kwekumanikidza kurasikirwa. Angle globe vharuvhu hazvikanganisike nyore nezvakasimba zvikamu. Disc inogona kugadzirwa mune nzwara kana siketi chimiro chemutemo wakanaka. Nekuda kwekushanduka kwenzira yekuyerera, muviri wevharuvhu unozokanganiswa neyakaitika simba remvura. Aya masimba anowanzo kuve madiki asi anogona kuwedzera nekuda kwehukuru hwevhavha uye huwandu hwemvura.
Diki mhangura chiwanikwa chakamisikidzwa Angle globe mavharuvhu anoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakachena dzemvura. Mazhinji maindasitiri Angle globe mavharuvhu akakwenenzverwa mhando yebhoneti, yakagadzirwa nesimbi yakakandwa, ndarira, simbi isina chinhu, uye duplex simbi zvinhu.
Zvakajairika kukura uye kumanikidza makirasi eAngle globe mavharuvhu anowanzo kuve DN50 ~ 250 (NPS2 ~ 10), Kirasi 150 ~ 800. Beyond iri renji, rakaringana disc rinowanzo shandiswa kudzikisa axial fluid kukanda padanda.
3, yakayerera kuyerera yekumira vharafu
Straight Globe vharuvhu inozivikanwawo seY-yakaumbwa globhu vharuvhu kana oblique globe vharuvhu, inogona kuve yakatwasuka-kuburikidza uye Angle vharafu iri mudunhu. Kuti uchinje iyo yakatwasuka-kuburikidza neanotutira mvura mugero, vharafu chigaro gomba uye vharafu dhizaini dhizaini mune imwe Angle, kuitira kuti kuyerera chiteshi kuve kwakanyanya kutwasuka neiyo axis, kuitira kudzikisa kurasikirwa kwekumanikidza, saka inonzi " kuerera chaiko ”. Ichi chimiro chakakurumbira mune mazhinji maficha uye chinoshandiswa zvakanyanya mumasisitimu emhepo. Simba rekutakura rakasimba rakagadziridzwa zvakanyanya, asi kuyedzwa nekuchenjerera kunodiwa mukushandisa. Akatwasuka kuyerera kwepasi mavharuvhu anewo chete kuyerera nzira. Mumhanyi ane hupamhi hwakazara uye akaderedzwa dhayamita. Haina kukodzera kunguruve pigging isina kubvisa bonnet.
Disc inowanzo kuve yakati sandara, nzwara - inotungamirwa kana yakapetwa kuzadzikisa zvinodiwa zvemamiriro akasiyana ekushanda. Iyo tapered disc mbiri inogona kugadzirwa nemataipi akawanda kuti agadzire ekutanga uye echipiri kupwanya. Flat disc uye claw gadhi disc mavharuvhu anogona kugadzirwa nekupukuta kuchenesa chigaro usati waiswa chisimbiso, kana chisimbiso cherabha chinogona kuiswa pachigaro kuti uvandudze kuvhara kwevhavha.
Yakatwasuka kuyerera kwepasi mavharuvhu anowanzo kukandwa uye akakwirira kumanikidza mavheji akagadzira. Zvinoenderana nemamiriro ekushanda akasiyana, zvinhu zvakasarudzika senge mbiri-simbi isina simbi inogona kusarudzwa kugadzira.
4. Matatu-nzira globe vharuvhu
Matatu-nzira globe mavharuvhu anowanzo shandiswa seanongedzera mavharuvhu mune yakanyanya kumanikidza masisitimu. Semuenzaniso, iyo yakanyanya tembiricha uye yakakwira yakamanikidza mvura yekupa mavharuvhu emagetsi chiteshi mabhaira. Kuenda kunowanzo shandiswa kana uchitanga, kuvhara, kana kutadza.
Chimwe chinowanzoitika mashandiro ekuita sevhavhizheni inodzosera ivhu yekumanikidza yekumanikidza. Iwo mavhavha maviri eruyamuro akaiswa pane imwechete-nzira-matatu vharuvhu vharuvhu, ichibvumira imwe vharuvhu kuti ishande zvakajairika kana imwe yacho ichida kuzviparadzanisa kana sevhisi. Nekuda kwechimiro chemukati, iyo mitatu-nzira globe vharuvhu ine yakakwira kuyerera kuramba. Iko kushandurwa kwenzira yemvura inozoburitsa yakakura yekuita simba pane yakakura dhayamita matatu-nzira gloves vharuvhu.
Mutumbi wema tee-way globe mavhavha anowanzo kukandwa simbi kana alloy simbi. Mavharuvhu anoshandiswa mumagetsi emagetsi akaiswa-matete kuti akunde matambudziko ekudonhedza anokonzerwa nekubatana kwakaputika.